mairie-antananarivo – Fandaminana ny fifamoivoizana
FANOKAFANA NY LALANA RAINIBETSIMISARAKA MANOLOANA NY PETITE VITESSE
Nosokafan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Lalana Rainibetsimisaraka manoloana ny Petite Vitesse nanomboka ny Talata 11 Septambra 2018 rehefa nihidy tsy afaka nampiasain’ny fiarakodia nandritra ny efa-bolana. Noraisin’ny Kaominina izao fanapahan-kevitra izao mba ho fisorohana ny fitohanan’ny fifamoivoizana izay tena isan’ny mampikaikaika ny olona tokoa ankehitriny.
Vao mangiran-dratsy araka izany dia tonga niara-nientana tamin’ny fanadiovana sy ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana izay tena hita fa manelingelina ny fifamoivoizana ireo ekipan’ny Boriboritany Voalohany, ireo mpiandraikitra ny tsena ary ny Polisy Monisipaly.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Boriboritany Voalohany dia efa iaraha-mahalala ary mbola hamafisina hatrany fa ny « trottoir » dia natokana ho an’ny mpandeha tongotra, ny arabe ho an’ny fiara ary ny tsena kosa dia ho an’ny mpivarotra, entanina hatrany araka izany ny tsirairay mba samy hanaraka izany fandaminana izany.Tsara ny manamarika fa ireo mpivarotra dia efa nifanaiky tamin’izy ireo fa samy hanaraka ireo lamina izay hapetraka.
Ny fanadiovana sy ny fandaminana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra dia mbola mitohy hatrany satria dia « Tanàna madio sy milamina no tanjona ».